जाडो मौसममा भुलेर पनि अनुहारमा प्रयोग नगर्नुहोस् यी ५ चिज ! -
जाडो मौसममा भुलेर पनि अनुहारमा प्रयोग नगर्नुहोस् यी ५ चिज !
जाडो मौसममा चिसो हावाको कारणले हाम्रो छालाको नरमपनालाई हटाउछ । यसको कारणले सुक्खापनको समस्या देखा पर्छ। यस समस्याबाट बच्नको लागि तपाईले घरेलु उपचार वा मोइस्चराइजरहरूको प्रयोग गर्नुपर्दछ, तर त्यहाँ केही चीजहरू छन् जुन यो सिजनमा तपाईले आफ्नो अनुहारमा प्रयोग गर्नु हुदैन। तथापि, अरु सिजनमा तपाईको अनुहारको सुन्दरता बढाउन प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। तर चिसोमा यसबाट टाढा रहनुहोस्। तपाई पनि जान्नुहोस् ती चीजहरू जुन चिसोमा प्रयोग गर्नाले सुन्दरता बढाउनुको साटो घटाउने छ ।
कागती: कागतीको धेरै सौन्दर्य फाइदाहरू छन्, तर पनि चिसो मौसममा तपाइको छालामा यसको प्रयोग गर्नु हुदैन। यसमा पाइने साईट्रिक एसिड र ब्लिचिङ्ग गुणहरूले तपाईको छालालाई सुख्खा बनाउछ। यदि तपाईको छाला सुख्खा छ भने जुन मौसममा पनि कागतीको धेरै प्रयोग नगर्नुहोस्।
भ्यासलीन :भ्यासलीन अनुहारमा प्रयोग नगर्नुहोस् चाहे घर्मी मौसममा होस् वा जाडो मौसममा। यदि तपाईले सोच्नु हुन्छ कि ओठलाई मुलायम बनाउनुको साथ साथै यसले अनुहारको सुख्खापनलाई हटाउँछ तर त्यसो नभएर यसले थप यो समस्यालाई बढाउनेछ। यो धेरै बाक्लो हुन्छ र यसले तपाइको अनुहारको छालाको मोइस्चराइजर(moisturizer) बन्द गरेर सुख्खा बनाउने छ।
बेकिङ्ग सोडा :यो अल्कलाइन प्रकृतिको हुन्छ। यसको प्रयोग गर्नाले तपाईको छालाको एसिड मेन्टल खराब हुन्छ । यसले आयल बेरीअरलाई पनि क्षति पुर्याउँछ र छालाको नरम हराएर जान्छ। यसकारण यसले जाडो मौसममा छालालाई झन बढी सुख्खा बनाउछ। यसलाई कहिल्यै पनि सिधै छालामा प्रयोग नगर्नुहोस्।
आलु: आलुमा पाइने ब्लीचिङ्ग र स्किन लाइटनिङ्ग गुणहरूले तपाइको अनुहारको दाग-पोतोहरुलाई हटाउने काम गर्दछ। तर चिसोमा यसले तपाईको सुन्दरतालाई बढाउनुको साटो घटाउँछ। यसको ब्लीचिङ्ग गुणले छालालाई सुख्खा बनाउँछ। त्यसकारण चिसोमा यसको प्रयोग गर्नाले सुख्खापनको समस्यालाई बढाउँन सक्छ।
तातोपानी: चिसोमा तातो पानीले तपाईलाई धेरै राहत दिन्छ, तर छालामा यसको प्रयोग गर्नाले क्षतिको कारण हुनसक्छ। सँधै मनतातो पानीको छनौट गर्नुहोस् चाहे अनुहार धुन होस् वा नुहाउनको लागि होस्। तातो पानीले तपाईको छालाको प्राकृतिक तेललाई नोक्सान पुर्याएर यसलाई सुख्खा बनाउँछ।
Previous यसरि ओठबाटै थाहा हुन्छ महिलाको यौन चाहना !!!
Next यी हुन दुबईकी पहिलो नेपाली महिला ट्याक्सी चालक